रंगशाला बनाउँछु भनेका घुर्मुसलाई मेयर रेणु दाहालले गरीन् यस्तो घोषणा – पुरा पढ्नुहोस्……
रंगशाला बनाउँछु भनेका घुर्मुसलाई मेयर रेणु दाहालले गरीन् यस्तो घोषणा
भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
महानगरले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रंगशाला बनाउन जग्गा दिनुका साथै आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवन प्याकेजअन्तर्गत गत बर्ष ५० लाख रकम रंगशाला निर्माणमा विनियोजन गरेका थिए । तर, १९ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी रकम फ्रिज भयो । चित्रवनको खाली १ सय ७० विगाहा जग्गा मध्ये १० विगाहा रंगशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको हो ।
भरतपुर महानगरले चालु बर्षको बजेटमा रंगशाला निर्माणका लागि भन्दै एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सो रकमबाटै काम सुरुवात गराउन सकिने महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेमराज जोशीले जानकारी दिए । –काठमाडौँटुडेबाट
Prevस्टेजमै बसेका प्रचण्डलाई गायक बद्री पंगेनीले यसरी धरधरी रुवाए (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
Nextसिन्डिकेटको विरोध गर्ने यातायात व्यवसायी हिस्स ! सरकारले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम…
हिजो असार १५ – धान दिबस ! हिलो खेलेर रमाइलो गर्दै यसरि मनाइयो ! हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल असार २५ गते बिहिबार इश्वी सन २०२० जुलाई ९ तारीख
भद्रगोल खेलेर भाइरल भएकी मुन्नीको पहिलो म्यूजिक भिडियोमा ,यसकारण बन्द भयो भद्रगोल – हेर्नुहोस (भिडियो सहित)